Fetin’ny Krismasy: mivoaka ny karazana kilalao - ewa.mg
Fetin’ny Krismasy: mivoaka ny karazana kilalao
Jeux - Jouet - News - Fetin’ny Krismasy: mivoaka ny karazana kilalao
Na takon’ny fampielezan-kevitra sy ny raharaha politika aza ny fiainan’ny Malagasy, miezaka ny ho volon’andro fety ihany ny eny an-tsena sy ny an’ny tokantrano sasantsasany. Mirantiranty eny an-tsena ny ravaky ny Krismasy mamirapiratra.
Mivoaka ihany koa ny kilalao ho an’ny kilonga. Efa manomboka mividy izany ny mpiantsena, saingy tsy mbola betsaka, raha ny filazan’ny mpivarotra.
Mbola malaza ny dinety sy ny saribakoly ho an’ny ankizivavikely. Samy manana ny karazany sy ny habeny izy ireny. Manomboka amin’ny 5000 Ar ny tsotra indrindra ary tafakatra amanetsiny ireo tsara kalitao.
Ny “overboard” kosa no malaza ho an’ny ankizilahy. Tsy misy latsaky ny 400.000 Ar anefa izy ireny. Ny sasany aza efa ny drone no andrandrainy ho azo, aterin’ingahibe Noely amin’ny alin’ny Krismasy. Lafo izy ireny kanefa misy ihany ireo ray aman-dreny vitsivitsy mahasahy mividy azy eny amin’ny magazay.
Mionona amin’ny fiara kely sy kilalao madinidinika kosa ny ankamaroan’ny olona miatsena. Maro karazana rahateo izy ireny amin’ny tsenan’ny Sinoa ary mora sy takatry ny maro ny vidiny.
Fantaro anefa fa misy koa ireo ankizy tsy misitraka kilalao izany mihitsy rehefa Krismasy fa miaina amin’ny zava-misy.
L’article Fetin’ny Krismasy: mivoaka ny karazana kilalao a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 04/12/2018
Kilalao - Noely
Jeux - News - Sport - News Mada
« Orange E-Sport Experience»: mpilalao 3, hisolo tena an’i Madagasikara any Dakar
Hotanterahina manomboka rahampitso 5 desambra, ny famaranana amin’ilay fifaninanana kontinantaly “E-Sport”, any Dakar. Fifaninanana izay handraisan’ny malagasy anjara. Nanainga ny alahady teo ireo solontenan’i Madagasikara hiatrika ity lalao ity. Mpilalao miisa 50 avy amin’ny firenena 11 manerana an’i Afrika no andrasana ho tonga handray anjara amin’ny ity lalao famaranana ity. Anisan’izany ny mpilalao avy eto Madagasikara. Fifaninanana afrikana, fanao isan-taona, hanondrotana avo ny “jeu vidéo” ity lalao ity. Tovolahy 3 no hitondra avo ny anaran’i Madagasikara any Dakar, mandritra izao fifaninanana “Jeu vidéo” izao. Ratsimiliavahoaka Ranto Manoro (Big Tom 2138), sokajy “Street Fighter”, Rakotoarison Mamitiana Michel (Gogo), sokajy “Asphalt” ary Ralainaivo Mamitiana Herilanto (Rayan), sokajy “PES 2019”. Ireo no voasafidy hiatrika ny “Orange E-Sport Experience” rehefa nahazo fandresena tamina lalao maro teto an-toerana, teo amin’ity taranja ity ary efa manana haavo teknika amin’ny fanaovana “jeu vidéo”. Izy ireo izay tohanan’ny Orange, mpiara miombona antoka amin’ny fikambanana “E-Sport” eto Madagasikara. Mirary ny Orange mba ho fifaninanana fakan-tahaka ity lalao afrikana amin’ny “jeu vidéo” ity ary mba hahafahana mitily ireo mpilalao afrikana vao misandratra ihany koa. “Dakar Digitak Show” Hifanindry an-dalana amin’ny lalao famaranana ny hetsika “Digital show” izay hampisehoana amin’ny fomba miavaka ny fahaiza-manaon’ireo mpisehatra amin’ny lafiny nomerika, toy ny “éditeurs de contenus” sy ny “développeurs” ary ny mpikirakira ara-teknika amin’ity sehatra ity. Izao hetsika izao dia haseho amin’ny alalan’ny hetsika ara-barotra, hampirantiana ny mahakasika ny tonton’ny nomerika sy ny “jeu vidéo”. Tanjona ny hampandrosoana sy hananganana sehatra miavaka amin’ny B2B ary hanomezana vahana ireo mpilalao manana ny maha izy azy. Eo ihany koa ny fampivondronana ny mpiantsehatra amin’ny lafiny “digital” manerana ny kontinanta afrikana sy manerana izao tontolo izao. Mi.RazL’article « Orange E-Sport Experience»: mpilalao 3, hisolo tena an’i Madagasikara any Dakar a été récupéré chez Newsmada.
Jeux - News - Delire Madagascar
TOERAM-PIALAMBOLY “MILALAOO”: Tsy fahita any an-kafa
Mitovy lenta amin’ny toerana fialana voly any ivelany ireny ny ao amin’ny “Milalaoo”. Raha eto Madagasikara, karazana kilalao mihoatra ny 25 tsy fahita any an-kafa azo lalaovina ao. Misy ny kilalao ao anaty trano toy ny “outrun racing”, “motor game”, “basket ball game, mini basket ball, game, hunting zone… Ankoatra ireo, misy ihany koa ny kilalao eny an-tokontany toy “swing” (chaise volante), “jumping frog”, “pendulum”, “bumblebee car” (voiture Ferrari)… Natao ho an’ny mpianakavy ny toeram-pialàna voly “Milalaoo”. Nambaran’ny tomponandraikitra, Valérie Rasoamanana fa tsy ny ankizy ihany no afaka milalao ao fa misy ihany koa ny kilalao natao ho an’ny olon-dehibe te hanala sorisory, te hiala voly. Tsy voatery mandeha lavitra vao mahita toeram-pialamboly. Eo anoloan’ny “centre commercial Akoor Digue”, Andohatapenaka no ahitana ny “Milalaoo”. Nanamafy ny tomponandraikitra avy ao amin’ny Akoor, Valérie Rasoamanana nandritra ny tafa tamin’ny mpanao gazety, omaly 29 novambra 2018 fa ovaina isaky ny enim-bolana ny kilalao arakaraky ny fankafizan’ny mpitsidika. Manomboka amin’ny 2000 Ariary ka hatramin’ny 20.000 Ariary ny sarany kilalao ao amin’ny “Milalaoo”. Amin’ny alalan’ny “carte” avokoa no ahafahana milalao. Raha ny fanampim-panazavana nomen’ny tomponandraikitry ny serasera an’ny Akoor, Josceline Andriamiarintsoa, hisokatra ny 5 desambra 2018 ny toeram-pilalaovana ary ny 7 desambra 2018 kosa ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy. Lynda A. Sary Horonan-tsary Cet article TOERAM-PIALAMBOLY “MILALAOO”: Tsy fahita any an-kafa est apparu en premier sur déliremadagascar.
Rainbow Six Siege dia manolotra week end maimaimpoana.
Nampandre i Ubisoft fa i Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ilay FPS tactique multijoueur dia hanana week-end fanandramana maimaimpoana. Noho izany, ireo mpilalao, manomboka amin’ny 15 ka hatramin’ny 18 Novambra ho an’ny PC, ary 15 ka hatramin’ny 19 Novambra amin’ny consoles, dia afaka manararaotra milalao tsy mandoa vola. Ireo izay te hanandrana dia afaka mitondra an’ireo agents 20 amin’ny mode base sy ireo modes ary cartes rehetra ao amin’ilay kilalao. Tahaky ny mahazatra rehefa misy an’ireny week-ends maimaimpoana ireny, ireo mpilalao dia afaka mitazona ny fandrosoany ao amin’ilay kilalao, milalao tsy ankihato ary manararaotra ny fihenam-bidy izay tonga hatramin’ny 70% amin’ny éditions Standard, Advanced, Gold sy Complete manomboka amin’ny 15 ka hatramin’ny 30 Novambra, arakaraky ny Plateforme.
Jeux - Jouet - News - Delire Madagascar
TATOU EVENTS: Hiverina mandritra “Tia M’teuf” ny kilalao Malagasy fahiny
Ho famerenana ny sotoaviana Malagasy amin’ny lafiny kilalao dia mikarakara hetsika ny “Tatou Events” ny alatsinainy 25 jona 2018. Eny amin’ny Villa verte Ambatomiarahavavy no hanatanterahina ny hetsika manomboka amin’ny 9 maraina mandra-parain’ny andro. Ho hita eny an-toerana avokoa ireo kilalao fanaon’ny kilonga Malagasy taloha toy ny tsikonina, katro, vitsiliha… Mirona any amin’ny fivoaran’ny teknolojia toy ny “jeu vidéo”, “facebook” sy ny maro hafa ny ankizy Malagasy amin’izao fotoana. Hany ka adino tanteraka ny kilalao taloha”, hoy ny mpikarakara, Vola Tatiana Ramanamihanta. Eny amin’ny super Music Analakely sy mandritra ny hetsika ny fividianana ny karatra. 10.000 Ariary ny saran’izany. Amin’ny maha hetsika ara-kolontsaina ny “Tia M’teuf”, hampiavaka azy ny fampisehoana ara-java-kanto. Handray anjara amin’ny hetsika ny tarika Gasy Mihanta. Hivetso ny hira mamoa ny vakoka Malagasy izy ireo. Ho feno tanteraka ny fandaharam-potoana mandritra ny tontolon’ny andron’ny 25 jona 2018 mandra-parain’ny andro satria hanafana ny “Tia M’teuf” ihany koa ireo mpanakanto ankafizin’ny tanora toy an’i THT, Johane, Tann Faya, Melanie Walker, Jess Flavi One sy ny DJ Scotty sy Tee Jay Jerry. Nambaran’ny mpikarakara fa hisy ny fandefasana afomanga ny alin’ny 25 jona 2018. Lynda A. TATOU EVENTS: Hiverina mandritra “Tia M’teuf” ny kilalao Malagasy fahiny Cet article TATOU EVENTS: Hiverina mandritra “Tia M’teuf” ny kilalao Malagasy fahiny est apparu en premier sur déliremadagascar.
Jeux - News - News Mada
Telma sy Star: fisarihana fahefatra ny “Kapisilnakà”
Nanomboka ny fiandohan’ny volana oktobra teo ny lalao “Kapisilnakà”, karakarain’ny Telma sy ny Star. Lalao mikiky ny kapisily saron’ny tavoahangy zava-pisotro Fresh, ary hita ao ny loka ho azon’ny mpanjifa. Isaky ny tapa-bolana ny fisarihana ny loka ka natao ny faran’ny volana novambra teo ny fisarihana fahefatra. Nahazo lokabe ny olona dimy ka lasan’i Fanambina Prosper sy Rtoa Solonirina Lucky ny televiziona ecran plat 32’’. Lasan-dRamarosandratana Albert ny ordinatera entin-tanana, azon-dRandrianarison Robison ny finday smartphone Telma Titan miampy famantaranandro Telma watch. Nahazo clé wingle 4G kosa i Mahatana Jean Rasolin, ahazoany maimaimpoana mampiasa internet mandritra ny enim-bolana. Mbola mitohy mandritra ny tapa-bolana ity lalao “Kapisilnakà” ity, ary miandry ny mpilalao sy ny mpanjifa ny lokabe, fiara Renault Kwid, ny moto Peugeot Kesbee, ny televiziona ecran plats roa, ny finday Telma Titan, ny clé wingle 4G, sns. Njaka A.L’article Telma sy Star: fisarihana fahefatra ny “Kapisilnakà” a été récupéré chez Newsmada.
Jeux - News - Triatra
Fifaninanana “Rallye Mathématiques” : Fampirisihana ny mpianatra hitia ny taranja kajy
Miditra amin’ny andiany faha-18 ny “Rallye Mathématiques”. Misokatra anio ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 1 febroary ny fisoratana anarana, ho an’ny sekoly rehetra vonona handray anjara amin’izany fifaninanana izany. Fifaninanana izay natao hanatsarana ny fifehezan’ny mpianatra ny taranja matematika, ka ny mpianatra manomboka amin’ny kilasy faha-6 hatramin’ny famaranana no kendrena. Entina hampirisihana ny mpianatra hitia izany taranja izany sy hampihatra azy amin’ny fiainana andavanandrony. Miendrika kilalao samihafa ny fifaninanana ka miaraka tsiefatrefatra ny mpandray anjara isaka ny sokajy. Kolejy sy lisea amin’ny faritra 9 no hiangaviana handray anjara amin’ny fifaninanana dia Analamanga, Matsiatra ambony, Atsimo Andrefana, Diana, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro ary Fort Dauphin, na mampihatra ny rafi-pampianarana malagasy, na frantsay. Ankoatra ny fampirisihana hitia ny taranja matematika dia tanjon’ny “Rallye Mathématiques” ihany koa ny fampiroboroboana ny tanora hanana toe-tsaina tia fiarahamonina sy toe-tsaina tia fifaninanana. Eo koa ny fampivondronana ny tanora, satria ny fifaninanana tahaka izao dia sehatra nasionaly. Nanomboka tamin’ny andiany faha-16 ny fifaninanana dia notarihin’ny lisea frantsay eto Antananarivo izay fiaraha-miasa amin’ny Gemma, na Groupement des Enseignants de Mathématiques de Madagascar, notohanan’ny Coopération d’action culturelle de France. Nihatsara ihany koa ny faharisihan’ny mpandray anjara tamin’io andiany faha-16 io, satria naherin’ny 150 ireo sekoly nandray anjara, ary 12 000 mahery ireo mpianatra. Laurena Nany L’article Fifaninanana “Rallye Mathématiques” : Fampirisihana ny mpianatra hitia ny taranja kajy est apparu en premier sur .L’article Fifaninanana “Rallye Mathématiques” : Fampirisihana ny mpianatra hitia ny taranja kajy a été récupéré chez Triatra.
Kilalao flat ball : Manipy kapila … mitaty baolina
Ny Flat Ball dia kilalao iray manana endrika kapila rehefa atsipy ary mivadika baolina rehefa tatazana. Tsotra le izy, mahafinaritra ary tonga dia afaka lalaovina. Tsy mitovy amin'ny baolina rehetra izay efa fahita izy io. Ny fiovaovan'ny fotoana hivadiany baolina dia tsy hampoizina ka manampy an'ilay fahafinaretana rehefa milalao azy. Maro ireo kilalao azo atao miaraka amin'ny flat ball na irery na miaraka amin'ny namana 2 na maromaro. Ny flat ball : "Phun Tag" Ny "Phun Tag" dia kilalao azo lalaovin'ny olona 3 na mihoatra miaraka amin'ny flat ball. Io kilalao io dia manome lanja ny flat ball vokatr'ilay fotoana miovaova hivadiany baolina. Ny tanjona amin'ito kilaoa ito dia ny hijanona farany ao anatin'ilay kilalao. Amin'ny teny hafa izany dia izay farany tafajanona no mandresy. Ny fomba filalaovana azy dia : Omena laharana ny mpilalao tsirairay ary mivondrona eo akaikin'ilay flat ball ; Ny fomba hanombohana ny lalao dia : misy mpilalao iray manindry an'ilay flat ball amin'ny tany ary miantso laharana iray; Ny mpilalao rehetra avy eo mitsoaka ankoatran'ilay mpilalao voaantso ; Miandry an'ilay flat ball hibontsina ilay mpilalao tsy nitsoaka dia maka an'ilay flat ball izy avy eo ary miantso laharana iray ; Avy eo izy manantona an'ilay mpilalao voaantso ka manao dingana lehibe 3 na dingana kely 10 ; Avy torahana ilay mpilalao ka raha voa dia miala ny lalao ; Avy eo miverina miantso laharana iray izy raha tsy voa fa raha voa kosa dia ilay olona nitorka no miverina miantso laharana iray ; Mitohy foana ny lalao raha tsy iray sisa no mijanona eo. Ny flat ball "Funky Monkey" Raha hilalao ny Funky Monkey amin'ny flat ball dia mila maka olona tsiroaroa na mihoatra. Ny tanjona amin'ilay Funky Monkey dia tsy avela azon'ilay "Monkey" ny flat ball. Ny fomba filalao an'ny Funky Monkey dia : Ny mpilalao tsirairay dia maka olona 2 hitaty an'ilay baolina ary misy olona eo anelanelan'ilay olona 2 mpitaty an'ilay baolina ; Ny iray amin'ny ilay mpilalao 2 dia manipy an'ilay flat ball amin'ny endrika kapila ho any amin'ilay mpitaty iray ka tsy avela ho tratran'ireo olona izay manelanelana ; Ireo olona eo afovoany dia mihezaka ny misambotra an'ilay flat ball na amin'ny endrika kapila izy na amin'ny endrika baolina ; Raha tratran'ilay olona eo afovoany ilay baolina dia mifamadika ny mpilalao ka ny mpanimpy indray no lasa eo afovoany ary ny teo afovoany lasa mpanimpy. Ny "Flat Potato" Ny Flat Potato dia mety tsara amin'ny toerana teritery. Ny tanjon'ilay lalao dia ny mijanona farany amin'ny lalao. Ny fomba filalaovana azy dia : Misy mpilalao iray manindry an'ilay flat ball mba hivadika kapila ; Omena an'ilay mpilalao eo akaiky ilay flat ball (manaraka ny fiodin'ny famataran'andro) ; Ny mpilalao izay mahazo an'ilay flat ball voalohany rehefa iny izy mivadika baolina iny no miala ny lalao ; Dia averina tsindrina indray ilay flat ball mba hivatika kapila ; Dia mitohy ny lalao avy eo ; Izay tafajanona farany no mandresy avy eo.
Jeux corporatis 3FB: nandravarava ny MDN sy ny JIRAMA
Nifampizaran’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena (MDN) sy ny Jirama, ny amboara, tamin’ny « Jeux Corporatifs », nokarakarain’ny 3FB, sampana baolina kitra. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy 8 sy ny alahady 9 desambra lasa teo, tao amin’ny kianja Hjra Ampefiloha.Anisan’ny nandrombahan’ny MDN, amboara ny teo amin’ny baolina kitra, nandreseny ny Jirama, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0. Toy izany koa ny teo amin’ny volley-ball, nandavoany ny senat, tamin’ny seta 2 no ho 0. Lasan-dry zareo ihany koa ny teo amin’ny tenisy, tamin’ny alalan-dRazafimanantsoa Nirina.Nanjakan’ny Jirama kosa ny basikety, izay nanilika ny Men, tamin’ny isa, 33 no ho 24, teo amin’ny famaranana. Adin’ny samy jiro sy rano ihany koa ny teo amin’ny tsipy kanetibe ka nahazo ny voalohany, ry Andry sy i Brice ary i Patrick, izay nanilika an’i Niaina sy i Tovo ary i Yves. Mbola ny ekipan’ny Jirama ihany koa nahazo ny teo amin’ny “belote” dia i Andry sy i Nirina, nanilika an’i Lova sy i Mira (Min.San).Fahombiazana tanteraka, araka izany, ity andiany voalohany tamin’ny “jeux corporatifis”, nokarakarain’ny 3FB ity, nambaran’ny Gbr Joasitera Rolando, tomponandraikitra voalohany nisahana ny ara-teknika sy nampandeha iny hetsika iny, fa tsy maintsy hisy ny andiany faharoa.Naneho ny fahafaham-po sy ny hafaliany ihany koa, i Jhone Love, filoha mpitantana ny 3FB, taranja baolina kitra. Torcelin L’article Jeux corporatis 3FB: nandravarava ny MDN sy ny JIRAMA a été récupéré chez Newsmada.
Cinéma - Déssins animés - Jeux - Jouet
Ny tantara tena marina tao anatin’ny sarimiaina Moana, Blanche Neige…
Nosintonina avy amin’ireo tantara tena nisy ny ankamaroan’ireo sarimiaina. Namboarina izy ireo, mba hampanonofy sy hahafinaritra ny mijery azy, ho an’ny ankizy. Inona no tena zava-nisy marina tao amin’ireo sarimiaina ireo. Nosoratan’i Madame Gabrielle-Suzanne de Villeneuve ny tantaran’i “La belle et la bête » tany amin’ny taona 1740 tany. Mpifankatia tena nisy no nangalany ilay tantara, izay an’i Pedro sy Catherine Gonsalvus. Aretina nahatonga azy ho voloina be no nahazo an’i Pedro. Niteraka fito izy ireo taty aoriana na dia tsy nivadika printsy tsara tarehy aza i Pedro ao anatin’ilay tantara tena izy. Nalaina avy tao amin’ilay angano nosoratan’i Hans Christian ilay mpanjakavavy ao anatin’ny “La reine des neiges”. Nipetraka tao amina lapa vita amin’ny lagilasy izy ary naka an-keriny zazakely iray no sady nanisy ody ratsy azy. Gerda, izay naman’io zaza io no nanavotra azy, taona vitsy taty aoriana. Ao anatin’ilay angano miresaka mahakasika ny “frères Grimm” no mirakitra ny mariazin’i Blanche-Neige sy ny printsy. Rehefa tonga tao ilay rafozam-bavy ratsy toetra dia nasaina nanao kiraro nisy vy mahamay sy mankarary tongotra ka noterena handihy mandra-pahafatiny izy. Tsy tena nisy i Vaiana (Moana), raha ny tantara no jerena. Rehefa hamorona ity sarimiaina ity ireo mpamokatra dia nankany Polynésie mihitsy. Taorian’io dian’izy ireo dia nanaitra azy ireo kokoa ny fahitana ireo vehivavy sady tsara tarehy no matanjaka. Maro be ireo zavatra hitan’izy ireo ka namoronana an’i Vaiana. Raha araka ny tantara kosa, izay mifanohitra tanteraka amin’ilay sary miaina tena misy, dia lehilahy mahia kely i Maui ary manao fehiloha. Rinahsoa Lahatsoratra nalaina avy amin'i :
« Milalaoo »: niampy iray ny toeram-pialamboly
Efa tafiditra ao anatin’ny filàna ho an’ny tsirairay ny fialamboly. Miezaka ny mamaly izany ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Anisan’ireny ny etsy amin’ny Akoor’Digue ka nanorina ny toeram-pialamboly “Milalaoo”. Sambany no nisy eto Madagasikara ! Nampahafantarina ny mpanao gazety, omaly, ny fisian’ny « Milalaoo » toeram-pialamboly iray vaovao eny amin’ny Akoor’ Digue. Manana fivelarana amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy ity raha ny fotodrafitrasa hita teny an-toerana. « Anisan’ny kendrena manokana hilalao sy hiala voly eny an-toerana ny Malagasy », hoy Andriamiarintsoa Josceline Yvonne, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny Akoor’ Digue. Mahatratra 25 ireo karazam-pialamboly afaka atao ao amin’ny « Milalaoo ». Azo sokajiana roa izy ireo. Ao ireo lalao ivelan’ny trano sy ireo kilalao ao anaty trano. Anisan’ireny ny swing (chaise volante), ny jumping frog, ny pendulum, bumblebee car (voiture Ferrari), ny châteaux gonflables, ny escalades, ny robot rotation sy ny outrun racing, ny motor game, ny crazy crocodile, ny small bowling, ny basket ball game et mini basket ball game, ny boxing game, ny the king of the hammer, ny hunting zone, ny big soccer, ny bicycle ride, ny hockey game, ny pandora’s box fighting game, ny crazy toys game, ny kiddie ride, ny shooting machine game. Anisan’ny mampiavaka ny toeram-pialamboly « Milalaoo » ny fampiasana ny « carte ». « Rehefa manana karatra amin’ny anaranao ianao, mampiditra fahana rehefa hilalao », hoy hatrany ity tompon’andraikitry ny serasera ity. Nohamafisiny hatrany fa « natao sahaza ny rehetra ny lalao sy ny fialamboly eto. Noho izany, raha fianakaviana manontolo (zaza, ankizy, tanora, lehibe) no mankaty, afaka mandray anjara avokoa ». Ny 7 desambra izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ity toeram-pialamboly vaovao ity. HaRy RazafindrakotoL’article « Milalaoo »: niampy iray ny toeram-pialamboly a été récupéré chez Newsmada.
Transfert des terres des colons : Requête d’une association de « Sakalava » à la HCC
La HCC version 2021 va-t-elle reconsidérer la Décision de 2015 ? Les deux « vary mangatsiaka » au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle relèvent du domaine foncier. Le premier dossier en instance à Ambohidahy concerne la loi portant refonte du régime juridique de la propriété foncière non privée. Quant au second, il a trait à la requête du « Fikambanan’ny Sakalava Zafin’ny Fotsy, Fivondronan’ny Malagasy Tia Tanindrazana » aux fins d’annulation et/ou de révision de la décision de la HCC relative à la loi portant transfert des terres ayant appartenu aux colons au profit des citoyens malagasy. Propriété individuelle. Ladite association de « Sakalava » remet en question la décision rendue le 02 juillet 2015 par la HCC qui avait déclaré que « la loi n°2015-013 portant transfert des terres ayant appartenu aux colons au profit des citoyens malagasy n’est pas conforme à la Constitution ». Et ce, en se basant sur l’article 34 de la Constitution qui dispose que « l’Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité » Aucun recours. La HCC version Jean-Eric Rakotoarisoa avait considéré que « la présente loi ne concerne ni une expropriation pour cause d’utilité publique ni d’un transfert de propriétés privées à l’Etat et qu’elle ne respecte pas le principe de l’indemnisation prévu par l’article 34 de la Constitution ». La requérante demande à ce que la HCC présidée actuellement par un autre Rakotoarisoa – Florent de son prénom – annule et/ou révise la décision rendue six ans auparavant par la haute juridiction. Même si la HCC est autrement composée, en revanche, la Constitution n’a pas changé notamment l’article 120 in fine qui stipule que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ». R.OL’article Transfert des terres des colons : Requête d’une association de « Sakalava » à la HCC a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Musique tropicale : Eusébia et Jaojoby en duo
Jaojoby, le roi du salegy entouré des siens. Dix ans maintenant que l’antre du roi du salegy a ouvert ses portes pour la première fois. Pour célébrer en grande pompe l’anniversaire du Jao’s Pub, Eusébia et Jaojoby, les maîtres des lieux, fêteront l’événement le 29 octobre prochain. Ce sera donc du salegy à profusion entre les « Alima », « Tsy hirenireny », « Tany tsaratsara » sans oublier les chansons de la jeune femme comme « Namako », ou « Mamy fitiavana ». Un moment de communion entre père et fille, mais surtout un moment mémorable avec le large public, tant les habitués des lieux que les mélomanes. Si chez les Jaojoby, la musique se joue en famille, le roi du salegy et les siens ont toujours voulu apporter leur pierre à l’édifice dans la promotion de l’art et de la culture. De là, Jao’s Pub est vite devenu une plateforme pour les noctambules. Et depuis, les artistes de tous horizons défilent, autant les grosses pointures que les étoiles montantes. Du côté d’Ambohipo, le dernier week-end du mois d’octobre se terminera sur un ton de salegy. Zo Toniaina L’article Musique tropicale : Eusébia et Jaojoby en duo a été récupéré chez Midi Madagasikara.